Namuhla osteochondrosis kudala inkinga enkulu kubantu abaningi. Phakathi isifo ukubhujiswa akwazi ukugcina intervertebral, okuyinto ubambe umthwalo phezu emgogodleni. Ngaphambili kwakucatshangwa ukuthi imbangela eyinhloko lesi sifo yilabo ezihlobene nokukhula esiwohlozayo izinqubo esiwohlozayo kabuhlungu emgogodleni, kodwa inkinga iwukuthi ukhwaliti ubuhlungu emuva kaningi kutholakala intsha.
Chondroitin futhi hondroprotektory
Ucwaningo lubonisa ukuthi lo mshini isifo kuxhomeke ngokwezinga elikhulu esilinganisweni inani chondroitin, isakhi esithile esikhethekile eziqukethwe disc uqwanga ungqimba. Le into igcina kuyaqina cartilage futhi kugcina umswakama e amathambo. Ngokuqondene nalokhu theory imithi, kukhona semali izidakamizwa, ezibizwa ngokuthi "hondroprotektory". Lapho osteochondrosis Lezi imithi bavame ebekiwe ngoba ziqukethe chondroitin kanye nekufaka sandla ekwenteni ncono iziguli.
Ukusebenzisa chondroprotectors kuyinto Umkhuba omusha practice yesimanje kwemithi, futhi akubona bonke odokotela ziyafana. It liyadingeka ukuze ukuthi yini okudingekayo osteochondrosis hondroprotektory, nokuthi bayakwazi ukubuyisela elahlekile uqwanga.
Chondroprotectors - kuyini?
Isinyathelo sokuqala ukuba baqonde indlela kwencazelo "chondroprotector" yavela. Esimweni esejwayelekile emzimbeni iqukethe chondrocytes - amaseli ayingxenye uqwanga nezicubu ehilelekile synthesis chondroitin. Inhloso yalolu ketshezi kuyinto ukusheshisa kabusha asidi i-hyaluronic yokutakula uqwanga futhi umswakama nokugcinwa uqwanga. Ngaphezu kwalokho, chondroitin ekhona Ukwakheka ngaphakathi joint capsule ketshezi. Enye ingxenye ebalulekile uqwanga kuyinto glucosamine, chondroitin eyandulela, enza imisebenzi efanayo. Ngakho, hondroprotektory ngempumelelo aqukethe kokubili izinto.
Ngosizo lithi chondroprotectors elandelayo iphathwa nezifo:
arthrosis (dystrophic, izinqubo esiwohlozayo emalungeni);
osteochondrosis (kuhlanganise hondroprotektory elisetshenziswa osteochondrosis yomgogodla wesibeletho);
bursitis, samathambo (ukuvuvukala emgogodleni nezihlanganiso);
kwamathambo (kwenyuke ithambo porosity lendwangu ukuntuleka calcium);
Lapho isizukulwane esisha hondroprotektory bavele emakethe, ziye zabangela a okuxubile ukusabela kodokotela. Abanye odokotela babekholelwa ukuthi leli qembu izidakamizwa ngcono uqwanga kanye nekhono ukubamba umswakama kuyo, kuyilapho abanye bakhomba yokuntuleka ezizwakalayo ukusetshenziswa kwemithi, njengoba bengeke bakwazi kuphela ukudala i-Ithonya le-placebo (omuhle ukusabela ngengqondo ukusebenzisa izidakamizwa). Ukuba ahambe umbono womunye umuntu, okokuqala kudingeka uqonde ukuthi lesi sifo - osteochondrosis, futhi ukuthi lihluke kanjani i-osteoarthritis (izinguquko dystrophic esiwohlozayo emalungwini).
Kungani ukuthuthukisa osteochondrosis
Njengoba sekuphawuliwe, isifo eminyakeni yamuva nje siye ngokuya wadalula ingxenye abasha sabantu, futhi lokhu uphethwe ingeyona kuphela ukuba anakekele asebekhulile. Ziyini izimbangela eziyinhloko zalokhu osteoarthritis yilezi:
kwamaphutha yokudla okunempilo;
umthwalo ngokomzimba okusezingeni eliphezulu;
ukuhlukumezeka, microcracks umgogodla;
Ngenxa yalokho lezi zici iyathinteka hhayi kuphela amathambo njengoba akwazi ukugcina intervertebral. Ingabe nemihuzuko nokumelana kwazo, basuke zikhubazekile, babe ziyaqothuka nasebubini. Khona-ke, isimo uqwanga liwohloka iketanga, kukhona ukuncipha ubheka ubungako bawo, kwaphazamisa lonke umsipha apharathasi begodu izinqubo yemilindankosi ezilwaneni ezinomgogodla. Ngakho, singakwazi ukuhlakulela ukhwaliti ubuhlungu emuva, okuyinto kwaba isizathu yokuthi isizukulwane esisha hondroprotektory zenzelwe.
I izinhlobo ephumelela kunazo imikhiqizo eyenziwe kusukela amathambo, imisipha, igazi, izinhlanzi nezilwane. Ukuphikisana nokungabaza kwalo odokotela esekelwe yokuthi imiphumela yemithi ngokuyinhloko eyenzelwe uketshezi lwamalunga ngaphakathi egobolondweni lelunga. Yilokhu kubangela imiphumela emihle ukwelashwa usebenzisa chondroprotectors ekwelapheni arthrosis. Umthelela esiphezulu ingatholakala kanyekanye isicelo wamafutha hondroprotektory, kanye nezidakamizwa e ifomu tablet. Nokho, oketshezini lwamalunga ka ikholomu umgogodla akuyona, ngakho kukhona izinhlobo ezahlukene imithi eklanyelwe aphathe kokubili yomgogodla nezihlanganiso.
Okuningi ikakhulukazi ukusetshenziswa kwezidakamizwa wukuthi hondroprotektory, osteochondrosis osebenzayo, aqukethe molecule okuyinto abe nesisindo elikhulu. Ngemva ngokuthatha izidakamizwa ligcinwe isikhathi eside, aze ukungena izicubu uqwanga sokukhubazeka komgogodla. Leli qiniso kwenza kube nesidingo ukuphuza umuthi wokwelapha i-osteoarthritis e imithamo emikhulu.
Umthelela esiphezulu ingatholakala uma uqala ukuthatha osteochondrosis hondroprotektory ekuqaleni kwalesi sifo. Nokho, ngokuvamile, sebeqala aphathwe lapho isifo ngawo ugcwaliseka ngokugcwele. Kubalulekile ukuqonda ukuthi uqwanga kabi abuyiselwe, ngakho izidakamizwa kufanele ziqale ukuthatha ngesikhathi kuqubuka isifo ngemithamo ezinkulu. Yiqiniso, ngeke ekudambiseni ngokuphelele lesi sifo kodwa uzoyeka inqubo nolokubhujiswa ezilengayo.
izidakamizwa Ezivamile non-steroidal esetshenziselwa ukwelapha osteoarthritis, ngokuyisisekelo izidakamizwa eqeda ukuvuvukala, basheshe okudambisa ubuhlungu, kodwa ngokuyinhloko ukuxazulula inkinga abakwazi. Chondroprotectors (izidakamizwa) e osteochondrosis wasebenzela kuwo isikhathi eside, kodwa umphumela kuyaphawuleka ngaphezulu. I plus elikhulu kwemithi ukungabi side effects kanye ibekezelelwe kahle iziguli. Ngaphezu kwalokho, phambili hondroprotektory kokujwayelekile ithambo inzuzo, ukwandisa ukukhiqizwa kabusha glucosamine, agqamise izitsha zamagama ukusuthisa yomgogodla kanye fibrin lipids. I ethile kuphela izidakamizwa kuyinto umthwalo omkhulu ngo kwesibindi ngesikhathi yokwelapha.
Yini engcono ukusetshenziswa hondroprotektory
Kunezinhlobo ezimbili zama-imithi: ukusetshenziswa yangaphakathi futhi umjovo ku imisipha noma amalunga omzimba ngiyaqaqanjelwa. Ukwakhiwa efanelekayo ekuphathweni ngomlomo kumele kusetshenziswe isikhathi eside. umphumela lingabonakala futhi ngemuva kwezinyanga 3. Ukuze engaguquki-state imithi edingekayo ukuthatha okungenani ezinyangeni eziyisithupha.
Popular emakethe kukhona amasha hondroprotektory isizukulwane, lezi zihlanganisa "Piaskledin" izidakamizwa "Alflutol", "rumalon". At inhliziyo nemithi eliqukethe umnkantsha amathambo uqwanga kwezilwane kanye izithako zemifino. Imithi "Chondroxide", "Mukosat", "Struktum", "hondrolon" zihlanganisa ukubunjwa yayo chondroitin sulfate.
Iqembu lesithathu of chondroprotective uyalandisa izidakamizwa "Arteparon", odala ngesisekelo mucopolysaccharides. Izidakamizwa "Artron flex" futhi "Don 'babe esebenzayo isithako glucosamine.
imithi ukuthi sihlanganise kokubili amavithamini, glucosamine futhi chondroitin. It izakhiwo "Teraflex", "Umthetho ofingqiwe S", "Artron". I okufana lokugcina chondroprotective izidakamizwa "Artrodar" okuyinto yakhiwa chondroitin nezingxenyana eqeda ukuvuvukala.
Imiphumela emihle etholakale ngokusebenzisa chondroprotectors kanye Physiotherapy, Magnetophoresis, iontophoresis, phonophoresis. ukusetshenziswa ngempumelelo yokugcoba equkethe chondroitin.
Akunconyelwe e osteochondrosis hondroprotektory ngenkathi besancelisa lactation, lapho izingxenye ngabanye we-non-ukwamukelwa nomuthi e pathologies ukuvuvukala emathunjini nasesiswini.
Phakathi ukwelashwa kufanele ugweme imithwalo ngokomzimba phezulu emalungeni ngiyaqaqanjelwa. Kumele wenze izizinda ezincane for isigamu sehora, okwenza ngomzuzu-10 amakhefu ukuphumula. Kungcono ukwenza umzimba elula kusukela Gymnastics Complex. Kunconywa ukushintsha Ukudla nge isisindo okweqile, udle amavithamini, fibre, ukudla okuluhlaza.
Barbiturates: Uhlu izidakamizwa, ekuphathweni kanye nokusebenza
Painkillers esetshenziswa ngesikhathi sokubeletha
CFA yinqwaba. incazelo
Cassette iziko: incazelo, ngebuhle nebubi
Wines "Abrau-Durso": Izibuyekezo
Tulip Resort & Spa Indawo Taba - 5-ihhotela lezinkanyezi eGibhithe amanani isabelomali kanye nasezingeni eliphezulu of service
Ukwelashwa osteoarthritis kanye arthritis: imithi Folk amakhambi
Benign inzululwane positional (DPPG)
Ukuthumela of impahla emikhunjini Modular: Izici ikalishi kwezimpahla ezifana